Diraamaa (Tiyaatira) wayyaanee! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDiraamaa (Tiyaatira) wayyaanee!
Baarentuu Gadaa Irraa, Ebla 20, 2018
Oath to die for TPLF and its flag.
Gabroonfattoonni weerartoonni, mootummoonni abbaa irree yoo itti tole kan isaan morme hidhanii dararuun, ajjeesuu fi dhabamsiisuun hojii ittiin beekamanii dha. Gaafa haalli akka yaadan ta’ufii didee irree cunqurfamtootaan rukutamuu eegalan ammoo kadhaa, diraamaa gowwoomsii adda addaatti seenu. Bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf asiif achi utaalu. Murni har’a aangoo humnaan qabatterra jirtu Wayyeeneenis waggoota 27n darban keessa kanuma raawwachaa turte.
Keessumaa yeroo ammaa kana dhaba jalee isii OPDO of-dura oofuun diraamaan itti jirtu dhugaa kaafaneef ragaa guddaadha.
Uummattoonni impaayeera itiyoophiyaa addatti sabni Oromoo waggoota 27n darban qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture. Sirna gabroonfatuu Wayyaanee ofirraa buusuuf waan danda’u hunda gochaa jira. Uummanni Oromoo qabsoo ilmaan isaa waliin ta’ee gaggeessaa jiru kanaanis injifannoolee duubatti hin deebine galmeessisaa jira. Injifannoo mulladhataa diina raasaa jiru kana galmeessisuuf ammoo ilmaan isaa qaroon hedduun wareegamniiru, hidhamaniis dararamaniiru, bakka buuteen isaanii kan dhabames amma hin beekamu.
Wayyaaneen waggoota 27n darbaniif aangoo humnaan qabatterra turtee qabeenya sabootaa addatti kan Oromoo saamuuf saboota impaayeera sanii mararrattuu dhittaa mirgaa daangaa hin qabne hedduu raawwattee jirti. Oromoon ammoo xiyyeeffannoo ishii isa duraa ture. Bakka baaayyeetti karaa bakka buu’oota isii kanneen akka OPDO, DHDN, BADN ergachuun yakka raawwataa turtee fi jirtu cinaatti kallattiidhaanis dhalattoota Tigiraay miseensota isii naannoolee biyyattii hedduutti kallattiin bobbaaftee saamicha, ajjeechaa, fi dararaa amma hin qabne raawwachaa turte. Qondaalonni dhalattoonni Tigraay hedduun naannoolee akka ummattoota kibbaa, Beenishaangul, Gaambeellaa, Sumaalee, Affaar keessattii bobba’anii bulchiinsa naannoolee keessa kallattiin galanii qajeelafama, murtii, ajaja kennaa turan, ammalleen akkasuma. Ajjeechaa, saamichaa fi dararaa adda addaas gaggeessaa turan.
Kanneen akka Oromiyaa, Amaaraa keessatti ammoo qondaaloota Tikaa fi basaastoota hedduu bobbaasuun ammammoo waraanas itti dabaluun yakka dda addaa karaa OPDO fi DHDN uummattoota nannoo kanaa irratti raawwataa bahan.
Uummattoonni biyyattii addatti uummanni Oromoo yakki wayyaanee kun isa nuffisiise waggoota hedduuf addatti waggoota 3n darbanii as sirna kanatti xumura gochuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa ture. Qawween, hidhaafi ajjeechaan wayyaanee osoo isa hin dhaabiin uummanni Oromoo mirga isaaf falamachaa jira. Keessumaa qeerroon ilmaan isaa.
Sirni kun tarkaanfii faashistummaa danuu fudhatee fincila uummataa kana dhaabuf yaalullee gongumaa hin dandeenye. Keessumaa ummanni Oromoo mirga isaa kabachiisuuf diddaan inni gaggeessaa jiru kan saboota biraafuu abdii ta’e ta’ee argameera. Sirnichis unkuramaa jira.
Tarii oolee bulinnaa laata jedhee diraamaa fakkeessii adda addaas yeroo ammaa kana dalagaa jira. Taatoonni isaa miseesnoonni OPDO fi kanneen biroo waan barreeffamee itti kenname qayyabatanii diraamaa kofalchiisaa keessi isaa huuba ta’e ummattoota biyyattii bilisummaa dheebootee qabsoorra jirutti argisiisaa jiru.
Diraamaan wayyaaneen barreeffamee akatara maqaa Oromootiin daldalu Abiyyi Ahimadiin dooyyaarratti muldhachaa jiru kun akka sirnichi yaade faayidaa qabaachaafii hin jiru. silaa yaanni wayyaanee kunoo Oromoon aangoo biyyattii isa dhumaa qabatee jettee hololuun Oromoo mirga abbaa biyyumaaf falamu afaanfaajjessuudha. Kun hin milkoofne.
Diraamaan dalagamaa jiru akkuma faranjoonnii afaan isaaniitiin diraamaa akkasiitin Faarsi jedhan, afaan Oromootti hoo hikkatu kofalchiisaa jechuudha, wanti wayyaaneen itti jirtu martuu kofalchiisaa ta’ee hafaa jira. Eeyyee Diraamaan amma Abiyyi Ahimad Oromoo keessaa muudame, anni ammoo deebi’ee kunoo ministeeroota haaraa guddinaa fi nageenya biyya kanaa dhugoomsan, kan gaafii ummataa deebisan muude jedhee taatoo ta’ee irratti hirmaachaa jiru kun faarsi, ykn kofalchiisaa huuba malee firii hin qabne ta’eera. Oromoon hin fudhanne. Keessi galabaa ta’uu hubateera. Akka sirna wayyaanee/EPRDF keessatti ykn jalatti jijjiramni hin dhufnes duruu beeka. Waan beekuufis qabsoo mirga abbaa biyyummaa ofii deeffachuuf taasisaa ture, ittis jira.
Diraamaan har’a wayyaaneen ministeerota muuduu, kaasuu, nama Afiyaa’ii ofiin jechaa ture kanneen akka ergamticha Abbaa Duulaa Gammadaa jijjirun gongumaa gaafii Oromooti miti. Gaafiin Oromoo wayyaaneen hundeen buqqa’uudha. Karaa kamiinuu Ergamaa sanaa fi kana wal jala jijjiruun gaafii saboota biyyattiitinis waan wali hin qabanneef gatii tokkollee hin qabu. Diraamaa faranjoonni Faarsii jettuun sana wanti inni fakkaatufis waanuma unkuramuu wayyaanee namatti argisiisuu malee gaafii ummataatiin wal hin qabneefi. Kan ta’aa jiru nama kofalchiisuu malee firii hin qabu. Wanti amma wayyaaneen ta’aa jiru tapaha ijoollee ittiin dinqisiisuuf ykn kofalchiisuuf Harreerra gaafa Sangaa kaa’aanii harreen sangaadha jechuu fakkaata.
Akkuma hunduu argaa fi dhagahaa jirutti guyyoota 2n dura jechuuniis Eebila 19 bara 2018 Ministeerri fakkeessii mootummaa wayyaanee namani DR. abiyyi Ahimad jedhamu paarlaamaa fakkeessii wayyaanee duratti dhihaatee kunoo ministeeroota haaraa waajjira akkasii fi akkanaatif muudeen jira harka dhahaa naaf simadhaa jedheera. Namoonni inni maqaa tarreesse dhiheesse kunis jajjaboo, kan mootummaa isaa fuunduratti tarkaanfachiisan, kan malaammaltummaa irratti duulan, kan guddinaa fi misooma darbees nagaa fi gaafii ummataa deebisan jechuun dhaadheesseera. Odoo muldhatuu ija dunuunfadhaa isiniin gowwoomsa jechuuf yaalee jira.
Dubbiin asirratti ka’u duraan dursa gaafiin uummattoota biyyattii addatti kan Oromoo maali ? maaliif qabsaawaa ture, maaliif qabsaawaa jira kan jedhuudha? Akka wayyaaneen hololaa jirtu OPDO keessaa ergamaa tokko muuchisuufi? Miti.Gaafiin Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaati.
Kun ammoo wayyaanee jalattii deebii akka hin arganne ifaadha. Inni lammataa namoonni akka haaraatti dhihaatanii gaafii ummataa ni deebisu, warra jijjirama waaraa fidan , malaammaltumaa ni balleessu, bulchiinsi gaariin deebii argata jedhamee maqaan isaanii tarrifamee fi ministeera waajjiroota adda addaa ta’an kun eenyudha kan jedhuudha?
Dhuguma namoota akka jedhamaniitii? Miti. Hunduu hattoota, abbootii irreeti, isuma Dr, abiyyi Ahimad dabalatee warri dhiheenya muudaman kun bakka buutoota wayyaaneeti malee kan uummata kamiituu miti. Keessumaa Oromoo kan bakka bu’anii miti. Qondaaloonni kun isuma abiyyiin dabalatee warra waggoota 27 darbaniif uummattoota biyyattii qorqaa, hidhaa fi ajjeesaa turanii dha.
Akka fakkeenyaatti yoo kaafnee ilaalle namoota amma ministeera ta’anii muudaman keessaa tokko ergamaa Tashoomaa Toogaa jedhamu kan waggoota 27 darbaniif wayyaanee amanamummaan tajaajilaa tureedha.
Namni kun gaggeessumaa hin danda’amu jedhamee nama Ambaasaddara ta’ee biyya alaatti ramadame ture, hara essaa abbaa jijjiramaa ta’ee dhufe?
Ergamaan biraa Shifarraa shugguxeeti, Innis ummata irraa dhaladhe jedhu ummata sidaamaa ficcisiisaa ture, walumaa galatti ummattoota kibbaa waggoota 27f dararaa ture, nama bochisaa tureedha. Namni kun nama malaammalatummaa fi yakka adda addaan beekamuudha. Har’a maaltu dhalatee abbaa jijjiramaa ta’e? inni ammaa maqaa oromootin bakka siraaj fageessaa bu’e ergamaan miseesni OPDO Mootummaa maqaasaa jedhamuhoo eenyu? Namni kun waggoota 27n darbaniif wayyaanee tajaajilaa ture, keessumaa yeroo kantiibaa magaalaa buraayyuu tureetti Oromoota naannoo sanii kumootaan buqqisee nama lafa isaanii qondaalootaa fi abbootii qabeenyaa dhalattoota Tigraay miseesnoota wayyaaneetti gurgureedha. Yakkamaa harki dhiigaati, namni akkanaa ammoo karaa kamiinuu abbaa jijjiramaa , kan rakkoo uummataa furu hin ta’u. Kanneen hafanis takka lama jennee yakka isaan waggoota 27 darbaniif uummattoota biyyattii irartti raawwachaa turan tarreessuu dandeenya, Haaraan isaan keessa hin jiru, hunduu warruma saboota biyyattii wayyaanee waliin ta’ee hidhaa fi hiisisaa, saamaa fi saamsisaa, ajjeesaa fi ajjeechisiisaa tureedha. Kan ta’aa jiru iddoo wal jijjiruudha. Diraamaa fakkeessii faars jenneen sanii kolfa qofaaf kan firi ykn dhama wayiituu hin qabne jechuudha. Kun ammoo gongumaa qabsoo sabootaa addatti qabsoo ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf gaggeessaa jiru hin dhaabu.
Egaa Wayyaaneen diraamaa akkamiituu dalagdu, diraamaan akkamiituu irra deddeebiin ergamtoota isii kanneen akka ministeera muummee fakkeessii Abiyyi Ahimadiin guyyuu raawwatamus dhugaa lafarra jiru jijjiruu hin danda’u. jijjiruus hin qabu, saboonni biyyattii addatti uummanni Oromoo qabsoo ka’eef galamaan gahuuf caalaatti cichoominaan qabsaayee mirga isaa barootaaf sarbame deeffachuu qaba. mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfachuu qaba. Qabsoo isaatin diinarra aanee mirga isaa gonfachuuf daandii xiqqoo isa hafte bakkaan gahuuf Fincila itti jiru finiinsuu qaba. kan gabrummaa jalaa nama baasu holola fakkeesii diinaa osoo hin taane qabsoo qofa waan ta’eef.